Booliska Baydhabo oo mamnuucay Mootooyinka Bajaajta iyo gaadiidka NOAHADA | allsaaxo online
Booliska Baydhabo oo mamnuucay Mootooyinka Bajaajta iyo gaadiidka NOAHADA
Published on October 16, 2018 by said · No Comments
Taliska Ciidamada Booliska Magaalada Baydhabo ayaa soo saaray amar looga mamnuucaayo Magaaladaasi inay socdaan gaadiidka Bajaajta iyo Gaadiidka NOAHADA, inta ay socdaan hawlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayo oo ka socda Magaalada Baydhabo.
Mahad C/raxmaan Aadan Taliyaha Booliska Gobolka Baay ayaa sheegay in Magaalada Baydhabo ay ka socdaan hawlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayo, islamarkaana ciidamada ay baarayaan gaadiidka kala duwan.
Wuxuu tilmaamay inta ay socdaan hawlgaladaasi ammaanka lagu xaqiijinaayo in Magaalada mamnuuc ay ka tahay inay socdaan Mootooyinka Bajaajta iyo gaadiidka NOHADA, wuxuuna amray ciidamada inay arrintaasi fuliyaan.
“Inta amniga socda, waxaan doonayaa gaadiidyada labada nooc ah ee Bajaajta iyo NOHADA in Magaalada Baydhabo aysan ku socon karin, ciidamadana waxaan fareynaa inay fuliyaan arrintaasi.” Ayuu yiri Taliyaha Booliska Gobolka Baay.
Mahad C/raxmaan ayaa sheegay in Shabaab ay soo maleegayaan qaraxyo kale oo ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah, balse arrintaasi ay ka hor tagayaan ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed.
Ciidamada Booliska Magaalada Baydhabo ayaa saaka Magaaladaasi waxa ay ka wadaan hawlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayo, sidoo kalena lagu baaraayo guryaha Magaalada.